Xaalada Kismaayo oo maanta degen iyo dhaq dhaqaaqyadii caadiga ahaa oo soo laabtay – SBC
Xaalada Kismaayo oo maanta degen iyo dhaq dhaqaaqyadii caadiga ahaa oo soo laabtay
Posted by Webmaster on July 1, 2013 Comments
Ka dib dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Kismaayo xarun goboleedka Jubada hoose ayaa waxaa maanta laga dareemayaa degenaan buuxda iyo dib u soo laabashada dhaq dhaqaaqyadii kala duwanaa ee magaalada.
Wariye yaasha SBC ee Kismaayo ku sugan ayaa soo sheegaya in si rasmi ah ay maanta u furmeen dhaq dhaqaaqyadii dadka, Ganacsiga, Gaadiidka iyo weliba goobaha waxbarasho oo ay ardayda u dareerayeen maanta.
Marka laga yimaado dib u soo laabashada dhaq dhaqaaqyadaas waxaa sidoo kale la dareemi karaa saameynta dagaaladii dhacay ay magaalada ku reebeen, waxaa ku jira goobaha caafimaadka waaweyn ee magaalada dhaawacyo aad u tiro badan oo sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaad u badan yihiin dad rayid ah.
Waxaa kale oo muuqanaya Amaanka oo aad iyo aad ay isugu howlahaan sugidiisa ciidamada Amaanka Jubaland, kuwaas oo lagu arki karo goobaha bulshadu isugu timaado ee magaalada dhexdeeda ah si ay u sugaan amaanka.
Madaxweynaha Maamulka Jubaland ayaa isagu tacsi u diray dhamaan dadkii rayidka ahaa iyo ciidankii ku nafwaayay dagaaladii ka dhacay Kismaayo, isagoo dhinaca kale ugu duceeyay inta dhaawaca ah in alle uu ka daweeyo.
Hadal uu saxaafada siiyay Habeen nimadii xalay ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubalnd uu sidoo kale ugu baaqay Hay’adaha gar gaarka in caawinaad deg deg ah la gaarsiiyo dadka ku waxyeeloobay dagaalada ka dhacay Kismaayo.
Sikastaba ha ahaatee si guud xaalada waxa ay aheyd maanta mid degen oo aan laheyn dareen dagaal iyo colaad taagan iyadoo dadkuna howlhoodii caadiga ahaa ay wateen.